ဟာသနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု — Steemkr
စိတ်ဖိစီးမှုသည်ခေတ်သစ်ခေတ်၏ကပ်ရောဂါဖြစ်ဟုဆိုသည်။ ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်အလုပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတ်မှတ်ရက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုက္ခကမိသားစုအသက်, ထိုထက်ပိုသောဖြစ်ကောင်းကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုနေရာအနှံ့ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ကျွန်တော်တို့ကိုသိသိသာသာထိခိုက်ပျက်စီးမှုဆကျဆံမသာ။ ရယ်မောနှင့် / သို့မဟုတ်ဟာသခံစား: ဒါပေမယ့်ပုံ, စိတ်ဖိစီးမှုမှရိုးရှင်းတဲ့ဖြေရှင်းချက်လည်းမရှိ။ ဒါဟာနီးပါးမည်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်နီးပါးသည့်အချိန်တွင်မဆိုသုံးနိုင်တယ်တဲ့သဘာဝအနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဟာသတစ်ခုသဘောမျိုးထိန်းသိမ်းခြင်းစိတ်ဖိစီးမှုနှင်ထုတ်အတွက်မရှိမဖြစ်အလိုအပ်ဆုံးအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟာသကျွန်တော်တို့ကို, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချဖို့တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားထောင့်ကနေအခြေအနေများအားကြည့်ရှုရန်, ငါတို့လူမှုရေးအပြန်အလှန်တိုးမြှင့်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
လေ့, တစ်ဦးချင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ဖိစီးမှုကနေတင်းမာနေသည်။ ဒါဟာခေတ်သစ်အသက်တာ၏ရုံပုံမှန်အတိုင်းအချက်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုအရ "ဟာသခန္ဓာကိုယ်ပိုမိုနက်ရှိုင်းအသက်ရှူသို့ချော်ဖို့ဖြစ်ပေါ်စေရာရယ်မောခြင်းအားပေးမှုအားဖြင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏သက်ရောက်သည်။ ဒီအလှည့်ကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြွက်သားတွေပြေစေပြီးနှင့် ရန်ပွဲသို့မဟုတ်လေယာဉ်ခရီးစဉ် '' ငြိမ်သက်ပြည်နယ်မောင်းနှင်ပိုသက်သာစေသောဆေးကိုပေး ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်တုံ့ပြန်မှုကနေစာနာအာရုံကြောစနစ်။ ထို့ကြောင့်ဟာသကိုယ်ထိလက်ရောက်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်သောက "(ဟာသ၏စိတ်ပညာ) ကွာပြေစေပြီး။ ခန္ဓာကိုယ်ကပိုဖြေလျော့ပေးခြင်းဖြစ်တဲ့အခါ, တဦးတည်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းပြည်နယ်ကိုလည်းတိုးတက်နေသည်။ ဒါကြောင့်ဟာသတစ်ဦးချင်း၏အပန်းဖြေတခုတခုအပေါ်မှာခြုံငုံသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော်တစ်ဦးကြောက်မက်ဘွယ်သောအဖြစ်သူတို့ကိုရိပ်မိလျှင်ပြဿနာများကြှနျုပျတို့၏စိတျထဲမှာကြီးမားတဲ့ဒီထက်မကနိုင်ပါတယ်။ ဒီသဘောနဲ့ကျနော်တို့အများစုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များစိတ်ပိုင်းဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောနိုင်ပါသည်။ သို့သော်ဟာသအတူကျွန်တော်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအလငျး၌အခြေအနေများတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ငါတို့သည်ငါတို့၏ဆက်ပြီးတချို့ဟာသရှာတှေ့နိုငျသောအခါအထုတ်လွှင့် က Klein အဆိုအရ "သူတို့မရှိတော့သူတို့တခါပြုသကဲ့သို့အဖြစ်အကြီးစားသို့မဟုတ်အဖြစ်အရေးကြီးသောပုံရသည်။ ဟာသကျွန်တော်တို့ရဲ့ကန့်သတ်ထားပုံတစ်ပုံဘောင်ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ဖွင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာထက်ပိုကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုရရှိသွားတဲ့။ ဟာသတစ်ခုသဘောမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွအေနေ "(ဟာသ၏အမြင်) ရက်နေ့မှာအသစ်တခုရှုထောင့်ပေးပါသည်။ စကားကိုတတ်သကဲ့သို့ "သဘောထားကအရာရာကိုဖြစ်၏။ " ကျွန်တော်တို့ဟာဟာသနှင့်အတူပြဿနာများရိပ်မိပုံကိုပြောင်းလဲစေလျှင်, ပြဿနာများကိုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ပါတယ်။
Group မှရယ်မောခြင်းလွဲချော်ခံရဖို့မဥပမာအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။ လူအတော်များများအထူးသဖြင့်ရယ်မောခြင်းထဲမှာအသက်တာ၌အကောင်းဆုံးအချိန်များမိတ်ဆွေကုမ္ပဏီခံစားကြောင်းခံစားရသည်။ အရ PsychAlive "ဟုဒေါက်တာ Dunbar မှာအုပ်စုတစုထဲမှာတလမ်းဖြီးလိမ်းပုံ, နှင့် အမျိုးမျိုးတစ်ဦးချင်းစီမျောက်ဝံများအကြားချည်နှောင်ခြင်းကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်လမ်းကိုရငျးနှီးလှုံ့တစ်ခုလှုပ်ရှားမှု "အဝေးကမြောကျမတို့" အဖြစ်လူမှုရေးရယ်မောခြင်းဖော်ပြသည်။ ရယ်သံများအုပ်စုသည်ဘွန်းကိုအထောက်အကူပြုရန်နှင့်မြင့်မားသောလူမှုရေးတိရိစ္ဆာန်များ ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက်အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ကြပေမည်။ ဒီတော့တစ်နည်းအတွက်ရယ်မောခြင်းငါတို့ဝေးကွာသောမျောက်ဝမ်းကွဲကနေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နှင့်လူမှုရေးကျန်းမာရေးအမျိုးအစားအသစ်တစ်မျိုးဖန်တီးပေးသွားဖို့အတှကျနညျးလမျးပါပြီပေလိမ့်မည်။
သို့သော်ငါတို့သည်အဘယ်သို့ထိုကဲ့သို့သောတင်းမာနေချိန်များတွင်ဟာသကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိကိုထိန်းသိမ်းရန်သလဲ? ဝက်ဘ်ဆိုက်အလွန်ကောင်းပြီစိတ်အပေါ်အခြေခံပြီး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုဤဒြပ်စင်နှင့်အတူစတင်နိုင်သည်ကလပ်လာရောက်ပူးပေါင်း, ဟာသစာအုပ်တွေဖတ်နေ, ဂိမ်းတစ်ခုသို့စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများအောင်, တစ်ရယ်စရာမိတျဆှေရှိခြင်း, အစွန်းရောက်တန်ဖိုးထားလေးမြတ်, ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေအတွင်းမှာအချိန်ထွက်တာ, ပိုမိုမကြာခဏပြုံး ဟာသထံအပ်နှံ, နှင့်မိတ်ဆွေများ အကြားရယ်မောခြင်းများအတွက်ဘုံမြေပြင်ဖြစ်လေသည်။ အဲဒီမှာဟာသကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိရေရှည်တည်တံ့ဖို့လုပျနိုငျအများအပြားလှုပ်ရှားမှုများဖြစ်ကြပေမယ့်ဒီအသုံးအများဆုံးဖြစ်ကြသည်။ နောက်ထပ်ထိုကဲ့သို့သောနည်းလမ်းဘာဝနာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဝနာတှငျကြှနျုပျတို့ကိုမကြာခဏကျွန်တော်တို့ကိုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဖိစီးမှုများအကြားအကွာအဝေးကိုရှာဖွေလျက်, အကွာအဝေးကျွန်တော်တို့ကိုအတွင်းဟာသတစ်ခုထက် သာ. ကြီးမြတ်သောသဘောမျိုးဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုကျွန်တော်တို့ကိုချိန်ခွင်လျှာအတွက်ဖြစ်ဘို့အလို့ငှာဆက်ဆံရမည်ဖြစ်သည်သောခေတ်သစ်ကမ္ဘာ၏တစ်ဦးဒေနာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှုလျော့ကျစေပါတယ်အဖြစ်ဟာသ, စိတ်ဖိစီးမှုတစ်ခုထိရောက်သောဆေးတစ်လက်အဖြစ်အဆိုပြုခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုခက်ခဲကြိမ်အပေါ်အပြုသဘောအမြင်ရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြု, ငါတို့ငြိမ်းချမ်းရေးမှာပိုပြီးခံစားရစေနိုင်သောလူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုလောင်ကျွမ်း။ ဟာသလူတိုင်းကိုင်စွဲသင့်ကြောင်းစိတ်ဖိစီးမှုဆန့်ကျင်နေတဲ့အခမဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။
esteem artzone wafrica humor stress